Alahadin’ny Dorkasy Hafa mihitsy ny vehivavy kristiana - ZOARA FANANTENANA
Alahadin’ny Dorkasy Hafa mihitsy ny vehivavy kristiana
28. mai, 2013Non classé Commentaires fermés sur Alahadin’ny Dorkasy Hafa mihitsy ny vehivavy kristiana
Niavaka ny fanamarihana ny fetin’ny reny omaly teto anivon’ny FJKM Ambohipo. Nanao hetsika manokana momba izany ny sampana Dorkasy Ambohipo. Ny maraina aloha nikarakara Buvette,nahitana sakafo samihafa. Nisongadina ny nahandro vita amin’ny saonjo, izay tsy mahazatra loatra ny olona eo amin’ny fiainana andavan’andro. Nisy ihany koa ny fivarotana ireo karazana fanomezana azo atolotra ny reny, toy ny fitaovana fampiasa ao an-tokan-trano, ny voninkazo, ny taozavatra malagasy, kojakoja fampiasan’ny vehivavy, hatramin’ny vokatry ny tany isankarazany. Ny alahady tolak’andro kosa, nanao fampisehoana natsoina hoe « Live Dorkasy » ity sampana ity. Seho an-tsehatra nohiraina mivantana fa tsy natao playback toy ny fahita matetika amin’ny fampisehoana. Hirahira sy Dihy fiderana an’Andriamanitra, nanaovana antso ho an’ny olona hanolo-tena ho an’Andriamanitra sy hanaraka ny asan’ny Dorakasy ihany koa.
Raha fintinina fohy mantsy ny asan’ny sampana Dorkasy, indrindra ny eto amin’ny FJKM Ambohipo, araka ny nampahafantarin’ny filohany, R/toa Rasoarimalala Emilienne na i Mme Kiki, dia miainga amin’ny teny fanevany ao @ Asa:9/36: « ….ary be ny asa soa sy fihantrana izay nataon’izany vehivavy (Dorkasy) izany ». Ankoatry ny asa fitoriana amin’ny maha-sampana azy eo anivon’ny fiangonana izany, dia mifantoka betsaka amin’ny asa sosialy ny sampana Dorkasy FJKM Ambohipo. Miara-miasa @ sampana rehetra eo
anivon’ny fiangonana anefa ny sampana Dorkasy @ fanatanterahany izany. Misy ny fanadihadiana ara-tsosialy atao, ka miainga @ ireny no ahafantarana ny olona mila fanampiana, sy ny zavatra tena tadiavin’ny olona. Misy ny fanampiana ho an’ny mahantra eo anivon’ny fiangonana, izany hoe ho an’ny mpino manana karatra; misy ihany koa anefa ny ho an’ny tsy mpiangona ao, toy ireo fanampiana omena @ tranga na loza tampoka, na vonjy aina maika.
Santionany @ izany ohatra ny fanadihadiana ara-tsosialy ataon’ny Dorkasy, ka ny biraom-piangonana sy ny pasitera no manapaka ny fanampiana tokony atao @ izany, toy ny vonjy voina, ny marary, na ny olona mila fandidiana maika ihany koa. Misy ihany koa ny fanadihadiana manokana rehefa alohan’ny noely ahafantarana ny filàn’ireo olona sahirana, ka manao rakitra zavatra ny mpino eto @ FJKM Ambohipo rehefa alahady mialoha ny krismasy. Ary dia zarain’ireo tsara sitrapo izany ny alatsinainy ampitson’iny. Ny FJKM Ambohipo moa ankehitrny efa miditra @ AGR (Activité Génératrice de Revenu) ihany koa.
Hetsika natao ho fanampiana sy ho fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Izany hoe karazana fampindramam-bola tsy misy tambiny na zanany, miainga @ fanadihadiana ataon’ny sampana Dorkasy ihany koa. Misy ihany koa ny Varin’i Jesoa, vary angonina @ mpino isaky ny alahady omena ny mahantra, na ireo tratry ny voina tampoka, ireny rehetra ireny dia mainga avy @ fanadihadiana ataon’ny sampana Dorkasy avokoa.
Copyright © 2013 Zoara fanantenana
Design by Zoara fanantenana